Isku Diyaarinta Mashruuca Dhisida Meel Dhalinta ee Dubai? | Haa, aragti!
Published by Shirkadda Dubai City at June 4, 2019
Isku Diyaarinta Mashruuca Isboortiga Mucaaridka ee Dubai
Is Dubai Ujeeddada ugu habboon ee loogu talagalay Qoysaska Dhallinta yar? Dubai waxay ku dhaqaaqday isbadal deg deg ah dhowrkii sano ee la soo dhaafay, iyada oo ay ku soo qulquleen dad aad u badan maal-gashiga, fursadaha shaqo iyo koror qurbajooga dad ku dhow dhow 8 million sida 2013. Marka la eego dhammaan faa'iidooyinka cajiibka ah ee magaalada waa in ay bixisaa, waxay heshay a xiisaha sii kordhaya ee xirfadleyda shaqada iyo qoysaska da'da yar ee doonaya inay garaacaan isku dheelitirka nolosha-nolosha. Waaliddiinta ka fekeraya inay u guuraan goobtaan casriga dhexe ee casriga ah, magaaladu waxay leedahay waxyaabo badan oo ay bixiyaan oo keliya maahee mustaqbalkiisa-waayo, laakiin sidoo kale carruurta iyo barbaarinta qoyska.
Waxqabadyada Carruurta iyo Daryeelka Qoyska
Dubai waa mid aan qariib ahayn oo loogu talagalay dhaqdhaqaaqa carruurta ee saaxiibtinimo waxayna ku darsataa ikhtiyaaro kala duwan oo loogu talagalay maalin madadaalo ah. Heer-kulka diirran ee sanadka taasoo macnaheedu yahay in fasaxyada todobaadka ee xeebta ay had iyo jeer yihiin ikhtiyaari, ama haddii aad dareemayso inaad ka badan tahay dhinaca soo jiidashada, waxaad ka dhigi kartaa badi qoraxda booqasho mid ka mid ah beeraha biyaha ee weyn ee Dubai, 'Aquaventure' ama 'Wild Wadi' . Inta lagu jiro bilaha xagaaga, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad qaboojisid waxqabadyo gudaha ah sida
Mid ka mid ah Dubai Goobaha Cusub ee Gawaarida ee gudaha oo ay ku jiraan 'Flip Out Dubai' ama 'Bounce', kuwaas oo bixiya xeryaha fasaxyada, xafladaha xafladda dhalashada iyo xirmooyinka qoyska. Muuqaalka Dubai waa mid kale oo aad u weyn oo leh soojiidasho "Origins Arab Arabia" oo ku yaala mid ka mid ah dhismooyinka ugu dheer ee Dubai ee dhismaha.
The Nidaamka Iskuulka ee Dubai wuxuu bixiyaa heerarka caalamiga ah ee waxbarashada oo ay ku jiraan tiro aad u tiro badan oo iskuulaad qurbaha ah oo ku shaqeeya adeegsiga agab Manhajka Qaranka oo laga keenay gobollada kooxaha shisheeyaha kaladuwan. Tusaale ahaan, kharashyada ka guuraya UK waxay raadsan karaan iskuul wax baraya Manhajka Qaranka ee Ingiriiska, halka kuwa ka socda Mareykanka ay iska qori karaan kids ee u dhiganta Mareykanka. Qaabkaas, carruurtu maaha inay iska dhaafaan heerarka sare ee waxbarasho ee laga bixiyo dalalkooda waxayna ka hadli doonaan isla waxyaabaha ay isku dhiganayaan asaagooda lagu baro waddankooda.
Dubai waa magaalo aad u amaan badan kuna faanta mid ka mid ah heerarka ugu hooseeya dambiyada marka loo eego magaalooyinka ay le egyihiin dadka iyo bulshada. Kaliya taa maaha, laakiin UAE guud ahaan waxaa loo qiimeeyay inay tahay dalka labaad ee nabdoon ee adduunka ee la booqdo iyadoo loo eegayo 'Waa kuwee? Safarka ', iyadoo waalidiinta ay ku wargelinayaan inay dareemayaan nabadgelyo qoysaskooda markay dalxiis tagayaan magaalooyinka.
Guud ahaan Dubai waxay ku kacdaa lacag aad u badan si ay u siiso dhalinyarada xirfadleyda ah ee shaqeeya iyo qoysaskooda, laga soo bilaabo nashaadaadka madadaalo ee qoyska ilaa amniga iyo waxbarashada. Haddii aad raadineysid meel aad ku nooshiiso qoyskaaga oo aad horumariso meheraddaada, Dubai ayaa kaliya noqon karta meel.
Haa, xaqiiqdii waa Imaaraadka Carabta Emirates waa meel kufiican nolosha qoyska. Iyo marka aad isweydiiso wax ku saabsan Bariga Dhexe. Dubai Ma Ujeeddada Ugu habboon ee loogu talagalay Qoysaska Dhallin-yarada ah, Haa magaaladan iyo dalal kale oo tiro yar ayaa iyaguna saaxiibtinnimo u leh sidii ay noloshaadu u degi lahayd. Imaaraadkuna waa meesha ugufiican haddii aad rabtid inaad degto Bariga Dhexe.
Shirkadda Dubai City hadda siinta wanaagsan hagayaal ee Shaqooyinka Dubai. Kooxdayadu waxay go'aansadeen inay ku daraan macluumaadka luqad kasta anaga Shaqooyinka ku yaala Dubai. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, waxaad hadda ka heli kartaa hagitaanno, talooyin iyo shaqaalaynta United Arab Emirates oo leh luqaddaada.